ikhaya AMAZIKO E-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola base Italiyane U-Emerson Palmieri Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo le-Football Genius eyaziwa kakhulu ngeNqampu; "Emer". Ibali lethu le-Emerson Palmieri yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts ikuleta i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela ngexesha lokuzalwa kwakhe. Uhlalutyo lubandakanya ibali lobomi bakhe phambi kobuqili, ubomi bentsapho kunye nezinto ezininzi ezithintekayo ngaye.
Ewe, wonke umntu uyazi malunga nomdlalo wakhe kodwa abambalwa bacinga u-Emerson Palmieri we-Bio onomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokunye okunye, masiqale.
U-Emerson Palmieri Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Obomi bakwangoko
U-Emerson Palmieri dos Santos, owaziwa njengoEmerson Palmieri okanye u-Emerson nje wazalwa ngo-3rd Agasti 1994 eSantos, eSão Paulo, eBrazil. Wazalelwa kumama wakhe waseNtaliyane, uEliana Palmieri kunye noyise waseBrazil, uReginaldo Alves dos Santos.
U-Emerson unomzali waseNtaliyane ngonina kwaye ube ngummi waseNtaliyane ukususela ngo-Matshi 2017. Wakhula nomzalwana wakhe omdala, Giovanni, ngubani na umdlali webhola webhola odlala ngokuya naye. U-Emerson ube ngumthandi webhola leNgesi kuba wayeyiminyaka eyi-15 ubudala.
Wenza intetho yakhe kwiSantos ngexesha le-16 emva kokungena kwinkqubo yenkqubo yolutsha kunye no-18 ebeziziqhelanise kwiqela lokuqala, ngokubulela kuye ekukhuleni kwizinga eliphezulu kakhulu lebhola lebhola lebhola. AbakwaScouts baqala ukumjikeleza njengeentlanzi ukususela emva kokuwina i-2013 Copa Sao Paulo de Futebol Junior kwi-side ye-Santos U20. KwakunguPalermo scouts ekugqibeleni wamenza waya eYurophu. Ukhetho lwakhe lwaseNtaliyane luza kubulela umama wakhe ovela kweli lizwe. U-Emerson wasebenzisa elo thuba ukuze atyelele ngakumbi kwintsapho yakhe eyongezelelweyo.
Iqela le-Italy lasePalermo, owathi wamboleka ngexesha le-2014 / 15 ngenketho yokuthenga. Ngelishwa, amathuba akhe okukhanya ayembalwa kwaye aphakathi kwaye emva kokuba enze ukubonakala nje kwe-9 nje iqela alizange lithathwe njengento yokwenza isicwangciso sigxina.
Ukulahleka kukaPalermo kwakungenzuzo yeRom njengoko bawuthatha--21 oneminyaka-ubudala ubudala ngemboleko kwixesha le-2015 / 16. Wachitha ixesha lakhe lokuqala e-Stadio Olimpico njengento engathandabuzekiyo kuLucas Digne, kodwa wabonisa isithembiso esanele sokuthi imali yakhe yemali mboleko iqhutywe ixesha elide. Ngelo xesha SikaAntonio Conte U-Chelsea wangena. Abanye, njengoko bethethayo, ngoku iimbali.
U-Emerson Palmieri Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ulwalamano lobomi
Kulula kakhulu ukuba uthandane kwaye ubanjwe kwisivunguvungu senkxalabo yokucwangcisa ubomi 'kunye naphakade'. Yiyo imeko kaEmerson Palmieri oye wabantwana bakhe abathandekayo, Isadora Nascimento kuba babini babeselula.
U-Emerson wadibana nentombi yakhe yexesha elide i-Isadora Nascimento e-Brazil, kwaye aba babini bebonke bebonke kunye. Ibhola yeFlabathi ekutholeni lula kakhulu ukubona uLatina ovuthayo, owamkela ukuba ukhangele kakhulu u-Emerson udlala.
Ngaphambili wathi: "Xa ndiya emidlalweni, ndiyomelele kakhulu, ndiyindoda, ndiyabonga ngokuthanda ubomi bam. Ndandisoloko ndiyithanda ibhola yebhola kodwa kungekudala kakhulu ukuyijonga. "
U-Emerson, onokulingana nabalandeli baka-200,000 Instagram kwaye ubeka rhoqo imifanekiso yothando lobomi bakhe obonakala ngathi uyabathanda kwaye uyaziqhenya ngempumelelo yakhe.
UIsadora wakhawula ngesithombe sikaEmerson esithi: "Unomdla kakhulu, unomnandi kakhulu. Uhlala ethethile izinto ezintle kum, wenza izinto ezimangalisekanga andizange ndikholelwe ukuba zenzeke, kwaye undiphathe kakuhle. Uhloniphe mna kunye nosapho lwam. Ndiya kuhlala ndiyakuthanda, uEmerson! "
U-Emerson Palmieri Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ubomi bomntu
U-Emerson Palmieri unomxholo olandelayo kubuntu bakhe.
Amandla ka-Emerson Palmieri: Uqulunqa, unomdla, unomusa, unentliziyo efudumeleyo kwaye uyonwabile.
Ubuthathaka bukaEmerson Palmieri: Unokuba nekratshi, unenkani, ozimeleyo, onobuqili kwaye ongapheliyo.
Uthando luka-Emerson Palmieri: Okokuqala, uthanda ubudlelwane bakhe kunye noIsadora. U-Emer uyakuthanda iholo lakhe, ethatha iiholide, ukuthenga izinto ezixabisekileyo ze-Isadora, imibala eqaqambileyo kunye nokuzonwabisa nabahlobo.
Yintoni u-Emerson Palmieri ayithandiyo: Ukungahoywa, ukujongana nobunzima kwaye ungaphathwa njengenkosi.
Nangona esemncinci, kodwa u-Emerson uyinkokeli yokuzalwa yendalo. Le nyaniso ayinakwazi kwabaninzi. Uyamangalisa, udala, uyazithemba, unzima kwaye unzima kakhulu ukumelana naye. U-Emerson uyakwazi ukuphumeza nantoni na ayifunayo kuyo nayiphi na indawo yobomi abazinikele kuyo. Kukho amandla athile kuye "Ukumkani wehlathi" isimo.
U-Emerson Palmieri Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Udlalwa kunye noNeymar
Ewe, njengoko kushiwo ngaphambili, u-Emerson wazalelwa eSantos, Sau Paulo, waza wajoyina intsha yaseSantos ehlelwe kwi-2009. Ngaba uyazi? ... Wachitha iminyaka emithandathu kunye neqela kwaye wadlala kunye Neymar ngexesha lakhe apho. Ukususela ngoko, u-Emerson wathabatha into okanye ezimbini ukusuka kwi-Child Golden Brazilian.
U-Emerson Palmieri Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ubomi Bentsapho
U-Emerson uvela kwintsapho ephakathi kwinqanaba lebhola lebhola. Enyanisweni, akayena kuphela umdlali webhola kunye negama likaPalmieri. Kubonakala ibhola lebhola ebantwini.
Umzalwana omdala kaEmerson u-Giovanni ozalwe ngabazali abafanayo kunye nexesha lokubhala, njengamanje badlala iFluminense eBrazil njengeNombolo 6. Kananjalo usebenza njengasekhohlo ekhohlo kwaye uye waqhawula ukubonakala kwe-100 kunye neblabhu yaseBrazil.
UGivani ufaniswe ngaphezu kweminyaka emihlanu ubudala kunomntakwabo.
U-Emerson Palmieri Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Sakhe simboko
U-Emmer ngumdlali webhola elijongene nokugqithiseleyo. Unako ukudlala kwi-post-back or back-wing positions kwaye uye wazalisa ngaphakathi ngexesha elifanelekileyo ngexesha lakhe e-Roma.
U-Emerson uthanda ukuqhubela phambili nokuba ngumkhuseli. Uyaziwa ngokuthatha kunye nokubetha indoda yakhe. Oku kutyhila isantya sakhe esinqabileyo, ukulinganisela kunye ne-samba-ezifana nezakhono zokuqhubela phambili kwinkqubo.
Naphezu kokuma kwi-5ft 9in, akesabi ukusebenzisa isakhelo sakhe ngenzuzo. U-Emerson unako ukudala ubuninzi bemfucu ehlangothini lwakhe ngobuqhetseba bakhe.
Kwesinye isigxina sentsimi, u-Emer ulungile nakwezinye iimeko ngokubonga kwintliziyo yakhe ekuphumeni kwakhe kwiimeko ezikhohlakeleyo. Ngaphambi kokuba eze e-Chelsea, izibalo zakhe zokuzikhusela zihambelana kakuhle neyona nto ibalulekileyo kwiSerie A.
U-Emerson Palmieri Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Umsebenzi wamazwe ngamazwe
U-Emerson umele iBrazil kwinqanaba elingaphantsi kwe-17 ngexesha le-2011 ye-South American phantsi kwe-17 yeBhola yeFlabathi kunye ne-2011 ye-FIFA U-17 yeNdebe yeHlabathi, njengengqungquthela yenkwenkwezi yangaphambili. Wayengumdlali ongenakuphikiswa ngexesha lezo zombini iikhomishana, ebhala umgomo wokulwa neChile kwi-16 Matshi 2011.
Ngo-Matshi i-2017, emva kokusondela ekuzuzeni ubumi besizwe sase-Italy, u-Emerson kuthiwa ulandelwa ngumqeqeshi omkhulu wase-Italy uGian Piero Ventura ngenjongo yokutshintsha ukuthembeka kwakhe kwiItali. Uphupha umtshintshi weza ngomhla we-29th ka-Matshi 2017.
QHUBEKA: Siyabulela ukufunda i-Emerson Palmieri Ibali yabantwana kunye neengxelo ezingezizo. at LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ubona into engabonakali kakuhle kweli nqaku, nceda ubeke izimvo zakho Qhagamshelana nathi!.
I-Leonardo Bonucci Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts